Naing Soe (20 December 15) ﻿
မြန်မာနိုင်ငံရေး မိုးလေဝသ အပြောင်းအလဲ မြန်နေသလို ဇာတ်ရှိန်လည်း အလွန်ပဲ တက်နေပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားချိန် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နှစ်ဦး တွေ့ဆုံမှုကလည်း နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်စေခဲ့သလို လက်ရှိအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တုံ့ပြန် စကားလုံးတွေကလည်း နိုင်ငံရေး မိုးလေဝသ အပြောင်းအလဲကို ခန့်မှန်းရခက်စေတာပါပဲ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး လေ့လာ သုံးသပ်သူ စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
----လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ်မှာ ဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ကို အရင်ပြောပြပေးပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ NLD ရဲ့ သဘောထားကတော့ ၉၀ တုန်းကလည်း ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး အာဏာ မလွှဲပြောင်းတဲ့ ပြဿနာ ကြုံခဲ့ရတော့၊ အဲဒါကို သင်ခန်းစာယူပြီး တတ်နိုင်သမျှ အာဏာ လွှဲပြောင်းမှုကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိဟန်တူပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကော့မူး မဲဆန္ဒနယ်မှာ စည်းရုံးရေး ကာလက တကယ်လို့ NLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အခြေခံပြီး အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တကယ် လက်တွေ့မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ပြီဆိုတာ သိတာနဲ့ သူတွေ့သင့် တွေ့ထိုက်တဲ့ လူတွေအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်တာ ရှိတယ်။ ဒါတင်မကဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ပါ တွေ့တယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘေးကကြည့်ရတဲ့ လူအနေနဲ့ တွေ့ရတာတော့ သူ့မူလ ရည်မှန်းချက်ပေါ့။
အေးအေးဆေးဆေး အာဏာ လွှဲပြောင်းရေးကို အထောက်ကူပြုမယ့် တွေ့ဆုံမှု အားလုံးကို သူတွေ့နေတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် NLD ဘက်က ခုထိ ခြေလှမ်းမှားတာ ကျွန်တော်တော့ တစ်ခုမှ မတွေ့ဘူး။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်သွားတာ တွေ့တယ်။ အခြေအနေတွေက အေးအေးဆေးဆေး ပြီးသွားမယ်လို့ ထင်စရာရှိတယ်။ သို့သော်လည်း ခုဘာဖြစ်လာလဲဆို ကိုရဲမိုးပေါ့။
ဒါက ဖေ့စ်ဘွခ်က သိရတာ။ နောက်မူးဇော်တို့ ၊ ဦးရဲထွဋ်တို့ ပြောလာတာ ရှိတယ်။ အဲဒီပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကျွန်တော်တော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ။ ဒါက တစ်ဖက် တပ်မတော် ဘက်ခြမ်းက ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာပြဿနာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အားလုံးက တပ်မတော်သားတွေပဲ။ အေးအေးဆေးဆေး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ သွားကြရင် အားလုံးက တစ်သံတည်း ထွက်မှာပေါ့။ နှစ်ဘက်စလုံးက တစ်သံတည်း ထွက်ကြရင် ပြေလည်သွားမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ဘက်ကလည်း အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကို လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို တရားဝင် ဖော်ထုတ်ပြီးပြီ။ တပ်မတော် ဘက်ကလည်း တစ်သံတည်း ထွက်ကြမယ်ဆိုရင် စေ့စပ် ဆွေးနွေးမှုတွေက ဘာမှ အဖြေမထွက်စရာ မရှိပါဘူး။ အနည်းဆုံး ပထမအဆင့် အေးအေးဆေးဆေး အာဏာလွှဲပြောင်းရေး အဆင့်ကတော့ အဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
သမ္မတနဲ့ တပ်ချုပ်ဘက်က အာဏာကို အေးအေးချမ်းချမ်း လွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ အပေါ် တချို့တွေက ယုံကြည်သလို၊ မယုံကြည်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ ဆရာကရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
အရင်တုန်း ကလည်း ပြဿနာတချို့က ရှိဖူးတာပေါ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကတိဖောက်ဖျက်တဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ လူတော်တော်များများ အနေနဲ့ မယုံရဲတဲ့ သံသယတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ဒီပြဿနာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ ယုံတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ဒီနေ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကိုလည်း သူပြောတဲ့ စကားကို သူတတ်နိုင်သလောက် တာဝန်ယူလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကတော့ အထူးအထွေ ပြောစရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ အကောင်းဘက်ကနေ မျှော်လင့်တယ်။
---ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံမှုက ဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်လဲ။
ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး သန်းရွှေ အနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ နိစ္စဓူဝ ကိစ္စတွေမှာ အသေးစိတ် ညွှန်ကြားတာမျိုးတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ သို့သော် တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေဆို သူလည်း နေနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့သြဇာကလည်း ရှိသင့်သလောက် ရှိဦးမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီလို အနေအထားမျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကတော့ ဟိုကတွေ့ချင်တယ်ဆို သူက Welcome ပေါ့ဗျာ။
သြဇာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က တစ်ဖက်ကို Pressure ပေးတာပဲ ပြောပြော၊ တွန်းအား ပေးတာပဲ ပြောပြော၊ တစ်ခုခု လုပ်ပေးလို့ ရတယ်။ အဲဒီလို မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သူကတော့ တွေ့မှာပဲ။ အဲဒီတော့ တွေ့တာကတော့ မှားတယ်လို့ မထင်ဘူး။ သို့သော် ဦးသန်းရွှေရဲ့ သြဇာပေါ့။ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ ရှိမလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ မမှန်းဆတတ်ဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သူ့သြဇာက တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ အကုန်လုံး မဟုတ်တောင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ သြဇာရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးရတာ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းမှာပါ။ အကျိုးရှိမှာပါ။
၂၀၁၁ အစိုးရဖွဲ့တုန်း ကတော့ သူ့ရဲ့ အစီအမံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ခုဆို အစိုးရက သက်တမ်းကုန်ခါနီးပြီ ဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ နောက်ထပ်များ အစီအမံတွေ ထပ်လုပ်နိုင်ခြေရှိလား။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက Posting တွေ၊ ဘယ်သူ ဘယ်တာဝန်ချထားတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြားတော့ ကြားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ Confirmed လုပ်လို့မရဘူး။ ပြောသာ ပြောနေကြတာ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ရေရေရာရာ ဘာမှမရှိဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်လုပ်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ သံသယမရှိပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ တိုင်းပြည် အတွက် ကောင်းတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည် အတွက် ကောင်းမယ်လို့ တော်တော်များများက ယုံကြည်နေချိန်မှာ သမ္မတရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က အာဏာ လွှဲပြောင်းရေးမှာ ဦးသန်းရွှေ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်လာရင် လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ပြောဆိုချက်လို့ပဲ ယူဆရမှာပေါ့ဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးဟောင်း အပေါ်မှာ လက်ရှိ တာဝန်ယူထားသူတွေ အနေနဲ့ ခုလို ပြောဆိုချက်က နည်းနည်းများ ဂါရဝတရားကို သွေဖည်ပြောဆိုရာ ရောက်နေလား။ ဒီအတွက် အကျိုးဆက်က ဘာများ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
အဲဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလို ယူဆလို့ ရတာပေါ့။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲလည်း ကြိုက်သလို ယူဆတာရှိမှာပဲ။ သို့သော်ဒါက အကူးအပြောင်းကို ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း မွန်မွန် သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိလဲဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်။ အဲဒါတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားနေဆဲပဲ။
--- တွေ့ဆုံမှုမှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် ပြောဆိုမှုများ ရှိနိုင်သလား။
ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒက တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် သွားတာကောင်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပြဿနာတွေက အများကြီး။ တော်တော်များများ ထင်နေတဲ့ ပြဿနာတွေထက်ကို ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိတယ်။ ပထမဦးဆုံး လောလောဆယ် အရေးတကြီး လိုအပ်တာက အေးအေးဆေးဆေး အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ၊ အဲဒါကိုပဲ Target ထားပြီး ဆွေးနွေးသင့်တယ်။
ဒါဆို အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ ကိုယ့်လက်ထဲ အာဏာရောက်ပြီဆိုမှ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆိုတာ ဖြည်းဖြည်း တစ်ဆင့်ချင်း သွားတာကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ခုတော်တော်များများ စဉ်းစားနေတာက တစ်ခါတည်းနဲ့ အကုန်ဆွေးနွေးဖို့ ၊ ကျွန်တော်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အခုတွေ့ဆုံပွဲမှာ အခြေခံဥပေဒ ပြင်ဆင်ရေး၊ ၅၉(စ) ၊၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အဲဒီလောက်ထိ Hot Issue တွေ ပါလာခဲ့ရင် ပါမပါ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ပါလာခဲ့ရင် ပြဿနာ ရှိတယ်။
ဒီဟာတွေက နည်းနည်း အရေးကြီးတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ လက်ရှိရပ်တည်ချက်နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် တပ်မတော်ဘက်က စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးရဲထွဋ် ပြောတဲ့စကားက အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ကောင်း ဆက်စပ်နိုင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အေးအေးဆေးဆေး အာဏာ လွှဲပြောင်းရေးကို ဦးတည် ပြောသင့်တယ်။ ဒါဆိုရင် ပြေလည်မယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ လိုချင်တာတွေ တစ်ထိုင်တည်း ပြောမယ်ဆို ရှုပ်ကုန်မယ်။
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒါတွေ သိပြီးသားပါ။ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြေပြေလည်လည် လုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်တဲ့ အစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောထားတယ်။ ဘယ်လို အစိုးရ ပုံစံဖြစ်စေချင်လဲ။
အဲဒါက ရွေးကောက်ပွဲ အကြို DVB Debate လုပ်တော့ ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းမေးတဲ့ အထဲထည့်တော့ ကျွန်တော် ဦးဝင်းမြင့်ကို အဲဒီမေးခွန်းမေးတယ်။ ကော့မူးမှာ မဲဆွယ်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD နိုင်ခဲ့ရင် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဦးတည်တဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့မယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီပြောဆိုချက်ဟာ Power Sharing ကို အခြေခံတဲ့အထိ ရောက်မလားမေးတော့ တကယ် လုပ်မှာပါလို့ ဦးဝင်းမြင့်က ပြန်ဖြေသွားတယ်။
အဲဒီစကားနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒါက အလွန်ကောင်းတဲ့ ဟာပါ။ ပြောရရင် NLD က ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘဲ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖွဲ့ဘူး။ ဝမ်းသာစရာ တစ်ချက်က အရင်အပတ်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ တော်တော်များများ အနိုင်မရခဲ့တဲ့၊ လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ ပါတီတွေနဲ့ တွေ့တယ်လို့ ကြားတယ်။
အဲဒါတော်တော် ကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို လူမျိုးစုတွေရဲ့ ခံစားမှုက သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီပွဲမှာ NLD အောင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့် လူမျိုးစုတွေ တော်တော် အခြေအနေ မကောင်းဘူး။ ဒီအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအနေအထားကို ပြန်အဖတ်ဆယ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြိုးစားဟန် တူတယ်။ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပြန်အဆင်ပြေဖို့ ကြိုးစားဟန်တူတယ်။
ဖွဲ့တော့မယ့် အစိုးရထဲမှာ လူမျိုးစုတွေကို နေရာပေးဖို့ ရှိလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဒါအလွန် ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တယ်။ တပ်မတော်နဲ့လည်း အကြေအလည် ညှိကြမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတာ NLD တစ်ခုတည်း အစိုးရဖွဲ့တာမျိုးထက် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ လူတွေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့တာ ကောင်းတယ်။ ဒါတွေက ကောင်းတဲ့ ဘက်က မြင်ရတဲ့ အလားအလာ အချို့ပါ။
ခုဆိုရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးသွားပေမယ့် အကောင်းဆုံး အရှုံးသမားလို့ ဆိုကြတဲ့ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ သူရဦးအောင်ကိုပါ။ သူတို့ကိုရော ရှေ့ဆက် နိုင်ငံရေး အခြေနေမှာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးက မြင်ချင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော် ပါစေချင်တာ မပါစေချင်တာက အဆုံးအဖြတ် နေရာမှာ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ညှိရမယ့်ကိစ္စ။ ညှိနှိုင်းပြီး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရှုံးတို့ ၊ အနိုင်တို့ကို သိပ်မပြောစေချင်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲက တကယ်တမ်းကျ အရှုံးအနိုင် ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ အရှုံး၊ အနိုင်က အလွန်ဆုံး ငါးနှစ်ပဲ။ ဒီနေ့လူကြိုက်များတဲ့ ပါတီက နောင်ငါးနှစ်ကြာရင် တစ်မျိုးတစ်မည် ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပဲ။ ဒါ NLD ရယ်လို့ ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး။ ဘယ်ပါတီဖြစ်ဖြစ်ပါ။
သန်းခေါင်ယံ အာဏာသိမ်းပွဲ အပြီးမှာ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ နိုင်ငံရေး သေသွားပြီလို့ ထင်ပေမယ့် ခုဆို မသေဘဲနဲ့ ပိုတောင်ရှေ့ထွက်လာတာ တွေ့ရတယ်။ သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
If တွေနဲ့ စဉ်းစားရမှာပေါ့။ ခုရွေးကောက်ပွဲမှာ သူရဦးရွှေမန်းလည်း မနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး ခုလို NLD တောင်ပြိုကမ်းပြို မနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဦးရွှေမန်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအခန်းက ရှေ့ဆက်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိကောင်းရှိမယ်။ အခုကတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆို သူဟာ USDP ပါတီထဲမှာ ရှိနေပေမယ့် NLD ရဲ့ ၊ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မဟာမိတ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ ဘေးက မြင်ရတာ၊ ဒီအနေအထားမျိုးမှာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍက ရှိနေဦးမှာပါ။ ဘယ် အနေအထားက ပါမယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိဘူး။
ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာ အစိုးရဘက်ကရော၊ တပ်မတော်သားဟောင်းတွေ ဘက်ကရော အသံတွေ ထွက်လာတယ်။ သံသယ စိတ်နည်းနည်းများ ပါနေသလား။ အဲဒါက သတင်းထုတ်ပြန်မှု အားနည်းချက်ကြောင့်လား။
သတင်းထုတ်ပြန်မှုနဲ့ မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်။ ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ထားလိုက်ကြပါတော့။ တစ်ခုရှိတာပေါ့ဗျာ။ သတင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် တရားဝင် သတင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရင်းမြစ်က ထုတ်ပြန်ပေးရင်တော့ ပြဿနာ ရှင်းတာပေါ့။
အခြားကြားလူ တစ်ယောက်၊ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ကြားလူ တစ်ယောက်က ထုတ်ပြန် ကြေညာတဲ့အခါမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိတတ်တယ်။ အဲဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေမှာ သူ့အပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မကျေနပ်တာတွေကြောင့်လည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့။ တစ်ခုလုံး ခြုံပြောရင် သတင်း ထုတ်ပြန်ပုံ မဟုတ်လို့ ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။
--- လာမယ့် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအနေနဲ့ အတိုက်အခံကောင်း အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား။
ဒါကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီမှာ အရှုံးအနိုင်ဆိုတာ သိပ်မရှိဘူး။ နိုင်သွားတဲ့ လူကတော့ အစိုးရဖွဲ့တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို အောင်ပွဲလို့ ယူဆရင်တော့ ဒါယူဆသူရဲ့ ပြဿနာပဲ။ ရှုံးသွားတဲ့ လူကလည်း အရှုံးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့မှာ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုရှိတယ်။ တည်ဆဲ အစိုးရကို Check and Balance လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။
အဲဒါက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ ဗမာလူမျိုးက အစိုးရဆိုရင် ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲ ထည့်ထားတာ။ အတိုက်အခံဆိုရင် သိပ်ဖိအားမကြီးဘူး။ USDP က ပါတီဖွဲ့ကတည်းက အစိုးရ တောက်လျှောက်ဖွဲ့ပြီး လုပ်နေလို့ ဘယ်ရမလဲ။ အတိုက်အခံ ဖြစ်သွားတာ သူ့ပါတီရေရှည် အတွက် ကောင်းပါတယ်။ အတိုက်အခံဘဝနဲ့ အစိုးရကို Check and Balance တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အနာဂတ်က အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ တစ်ခါရှုံးတာနဲ့ ပြီးသွားပြီလို့ ပြောလို့မရဘူး။
NLD မှာ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပြဿနာရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု လူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီကိစ္စကရော။
ဒီကိစ္စကပြောရင် တော်တော် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပြောရမယ်ဗျ။ ဦးထွေးမြင့် ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ သူမသေခင်မှာ အင်တာဗျူး တစ်ခုလုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ သူဘာပြောလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မူလရည်ရွယ်တာက NLD ကို တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ဖို့ပါ။ အခုဒီအတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။
အဲဒီတော့ ဘာကွာသွားသလဲလို့ မေးခွန်းမေးတဲ့သူက ထပ်မေးတယ်။ အခုလူမျိုးစုတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် တပ်ပေါင်းစု မဖွဲ့နိုင်တဲ့ အားနည်းချက်ပေါ့လို့ သူကဖြေပါတယ်။ ဥပမာ-ဖ.ဆ. ပ.လ ဆိုရင် လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံး ဖ.ဆ. ပ.လ အလံအောက်မှာ ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တော့ ဖ.ဆ.ပ.လ အလံအောက်မှာ ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြတယ်။ လူမျိုးစု အားလုံးကလည်း ဖ.ဆ.ပ.လ ကို သူတို့ပါတီလို့ သဘောထားကြတယ်။
အခု NLD က တပ်ပေါင်းစု မဟုတ်ဘဲ ပါတီဖြစ်နေတော့ ဒီအနေအထားမျိုးထိ ရောက်မလာဘူး။ အချို့ကတော့ ပြောကြတာ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ NLD တင်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း လူမျိုးစုတွေပဲ ဖြစ်တာမို့ NLD ဒီဟာ တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ပေါ့။ ခက်တာက သမိုင်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံခဲ့တာများပြီ။
ဥပမာ-မ.ဆ.လ ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်ကို တင်ပြီး လုပ်သွားတာပဲ။ ဗ.က.ပ ဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲပြီးတော့ ပူပူနွေးနွေးပြောရရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ လူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ကို ဒုသမ္မတပေးဖို့ လူမျိုးစုပါတီတွေက တောင်းတော့USDP က စိုင်းမောက်ခမ်းကို ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ လူမျိုးစုတွေ အမြင်မှာ ဗမာပါတီလို့ ထင်သွားမှာ ကျွန်တော်ဆိုးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီကိစ္စတွေ အခုချိန်မှာ မပြောချင်ပါဘူး။ အခုပြောရတာကလည်း လူမျိုးစုတွေနဲ့ NLD ကြားမှာ အဟ ကွာမသွားစေချင်လို့ပါ။
--- NLD က လူဟောင်း လက်ရှိ NNDP က ဦးသိန်းညွန့်က တပ်ပေါင်းစု လုပ်မယ်ပြောတယ်။ အဲဒီအပေါ်ကိုရော။
နံပါတ်တစ် မြန်မာပြည်မှာ ပါတီတွေများတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ တကယ်လည်း များတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး။ များမှာပဲ။ အခုဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားကြမလဲ။ တူရာတူရာစုပြီး တပ်ပေါင်းစု ပုံစံမျိုးသွားတာ အဖြစ်သင့်ဆုံး လမ်းကြောင်းပဲ။ အဲဒီရှုထောင့်က ပြောရင် ကျွန်တော် လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြည့်အဝ လက်ခံလို့ မရတာ ဘာလဲ။
လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားရင် ဗမာပြည် တပ်ပေါင်းစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စင်ပြိုင်အထိတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ ပြောတာ။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လက်ခံမယ်၊ မခံဘူးတော့ မသိဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည် ဖြစ်စေ၊ ဦးမဆောင်သည် ဖြစ်စေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုကို တည်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက်က စခေါ်ရမယ်။
အဲဒါကိုမှ တစ်ဖက်က ငြင်းရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဦးသိန်းညွန့် ပြောတဲ့ တပ်ပေါင်းစုကို မူအရ ထောက်ခံတယ်။ သို့သော် ဒီမိုကရေတစ် အင်အားစုတွေထဲမှာ သွေးကွဲစေတဲ့ တပ်ပေါင်းစုကို မကြိုက်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစု လမ်းကြောင်းမှာ ညီညီညွတ်ညွတ် ဖြစ်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်။ အဲဒီအတွက် တစ်ဖက်တည်းတော့ မပြောလိုဘူး။ နှစ်ဖက်လုံးကို ပြောရမှာ။
NDF ခွဲထွက်တော့လည်း ပြန်စုကြဖို့ တောက်လျှောက် ရေးတာ။ အခုမှ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောလည်း အလကားပဲ။ ကွဲသွားကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပြောရဦးမှာဘဲ။ ပြန်ဆက်ကြပါ။ ဘာကြောင့် ဆိုတော့ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေကြားမှာ ကွဲလို့မကောင်းဘူး။ နံပါတ်တစ် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ ညီညွတ်ရေး လုပ်ရမယ်။ နံပါတ်နှစ် ဆန့်ကျင်ဘက် ပါတီတွေ အာဏာရှင် အစိုးရဟောင်းက လာတဲ့ ပါတီတွေနဲ့ နားလည်မှု ရှိအောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒီနှစ်ခု အဆင်ပြေမှ ပွဲကပြီးမှာ။ ခုတော့ ကိုယ်ချင်းလည်း တပ်ပေါင်းစု မဖွဲ့နိုင်သေးဘူး။ အဲဒါကို အားပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။
၈၈ မျိုးဆက်က ပါတီ တစ်ခုထောင်မယ်လို့ ထုတ်ပြောထားပြီးပြီ။ သူတို့ ပါတီထောင်ရင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ဘယ်လိုပုံစံ ဖြစ်လာမလဲ။
နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် လက်ခံတယ်။ မင်းကိုနိုင်တို့ ၊ ကိုကိုကြီးတို့ လွတ်လွတ်ချင်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရေးတယ်။ သူတို့တွေ အိမ်အပြန်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး။ အဲဒီမှာလည်း နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်သင့်တယ်လို့ သဘောထားပေးတယ်။ မမှားဘူး ထောင်တာ။ သို့သော်လည်း တပ်ပေါင်းစု လမ်းကြောင်း မပျောက်စေနဲ့ ။ အဲဒီတပ်ပေါင်းစု ကလည်း လက်ရှိအခြေအနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုပဲ ဖြစ်ရမယ်။
အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ၊ မပါ ကိုယ့်ဘက်က ကမ်းလှမ်းကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်တော့ လုပ်ရမှာပေါ့။ ရနိုင်တဲ့ အင်အားစုနဲ့ တပ်ပေါင်းစု ရအောင်တော့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ခေါ်ရမယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာရင် အရေးကြီးဆုံး ကတော့ တစ်ပါတီစီ ကွဲပြီး မဲမကွဲဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအကွဲ မကောင်းဘူး၊ တတ်နိုင်သမျှ စည်းရုံးကြပါ။ ၏
ဘယ်လိုမှ မစည်းရုံးနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ကြိုးစားတော့ ကြိုးစား ကြည့်စေချင်တယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ အလံအမျိုးမျိုးထောင်ပြီး ကွဲမသွားဖို့ အရေးကြီးတယ်။
--- ကွဲသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အကျိုးဆက်ကတော့ တစ်ဖက်က စားသွားမှာပေါ့။
--- တစ်ဖက် ပါတီကရော နလန် ပြန်ထူနိုင်ပါဦးမလား။
ခင်ဗျားတို့က အခုအခြေအနေကိုပဲ ကြည့်တာကို။ နောက်ထပ် ငါးနှစ်လောက် စောင့်ကြည့်ပါဦး။ စောင့်ကြည့် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူတို့ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကိုယ့်လူတွေ ဘက်ကလည်း ဘာတွေ မှားမလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး။ ဥပမာ-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိပ်စန်းကောင်းတယ်။ ဒါတောင် လက်ပံတန်းမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ဘယ်လောက်တောင် ပြဿနာ ဖြစ်လဲ။ တော်တော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒီနေ့ဟီးရိုးက မနက်ဖြန် ဇီးရိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာ။
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် အချို့က ပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် ရောက်ရင်လည်း တောင်းဆိုမှာပဲလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကရော။
အဲဒီအခြေအနေက အရှည်ကြီး ပြောရမှာ။ ပြောစရာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဒီအင်တာဗျူးလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ရေးနေတယ်။ အကြမ်းပြောမယ်ဗျာ။ NLD အစိုးရဖြစ်ရင် နံပါတ်တစ် စိန်ခေါ်မှုက ကျောင်းသားကိစ္စ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကိစ္စ၊ လူမျိုးစု ပြဿနာကတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ကျော်လွှားနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်။ နံပါတ်သုံး ပြဿနာ ကတော့ တရုတ်နဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေ ရှိတယ်။
ဒီသုံးခုကတော့ လတ်တလော ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်ချက်တွေပဲ။ အသေးစိတ် ကိုတော့ မပြောချင်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံး ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး အာဏာ လွှဲပြောင်းဖို့ပဲ။ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ သိပ်မပြောချင်ဘူး။
အစိုးရကို ဦးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားအရ ဖွဲ့စည်းပုံက တားမြစ်ထားမှုကို ဘယ်လို ကျော်မယ်လို့ ထင်လဲ။
သူက ပါတီခေါင်းဆောင်၊ ပါတီတွေရဲ့ အဓိက Function က ပေါ်လစီ Guide Line ချတာပဲ။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပေါ်လစီ Guide Line ချကို ချပေးမှာပဲ။ ဒါဘယ်ဥပဒေနဲ့မှ တားမြစ်လို့ မရဘူး။ သမ္မတဆိုတာ ပြောရရင် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပဲ။ ပေါ်လစီကို ကြည့်ပြီး အလုပ် လုပ်ရတာ။ အဲဒီဆက်သွယ်မှုကို ကြည့်ပြီး အရေးယူလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြဿနာလို့ကို မထင်ဘူး ။ တစ်ခုပဲ။ သူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကိုင်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။
--- ဘာများ ဖြည့်စွက် ပြောချင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော် အပါအဝင် မဲဆန္ဒရှင် လူထုအားလုံး စိတ်ရှည် လက်ရှည်ရှိဖို့ လိုတယ်။ စိတ်ရှည်ကြပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ သည်းခံစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ။ ဒီအချိန်မှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါတွေ ဘာမှမလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
သတင်းတွေမျိုးစုံ ထွက်နေမယ်။ မတူတဲ့ အင်အားစုတွေက မတူတဲ့ သတင်းတွေကို မျိုးစုံထုတ်နေကြမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သိပ်သံသယများလို့ မရဘူး။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် သွားမှရမယ်။ အဲဒါကတော့ အရေးကြီးတယ်။ အားလုံးတူညီတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ NLD ကို မဲပေးကြတယ်။ ဒါကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ ရွေးတာ။ အဲဒီတော့ သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်။
အခုလို အပြောင်းအလဲ ကာလမှာ အစွန်းရောက် အလွန်အကျွံ သမားတွေက နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဒါကိုသတိထားဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
Naing Soe မက်ဆင်ဂျာ ဂျာနယ်။